"Ukuhlehla" (Sergei Dovlatov) - iqoqo lezindatshana ezimnandi ngokuphila noma amancane, njengoba bebizwa kanjalo umlobi - ". Ebucayini" Isenzo senzeka eminyakeni engu-70 e-Estonia, endaweni eyayaziwa ngokuthi ke omunye republic eziningi zaseSoviet. Sasiyini isikhathi? Singasho ukuthi kwaba inkathi we "ukudela okuthile" iningi bobabili bavume icala phakathi komphakathi kanye iqembu elibusayo. Imibono esemthethweni uhlala ubuholi nesingazanyazanyiswa beqembu futhi indlela le socialism athuthukile. Nokho, ezinye kwemizwelo owandile umphakathi: kuba ukuvukela ezikhulayo ngokumelene "onokuqundeka" futhi "usizi." Esikhathini izincwadi, ebhayisikobho, yabezindaba ngisho ekhaya, ngesikhathi "ekhishini" izingxoxo ukhombisa i- "iqiniso" efanayo, kodwa ngaphandle kwenkululeko - lena yokunivumela ezinkulu phezu ingxenye isimo esenana "ukuthula" e abangamaphesenti angu-90. Kodwa babekezelele le "ebucayini ukungalingani" kungenzeka isikhathi eside?
S. Dovlatov, "ebucayini": isifinyezo
Ukuhlehla ungowokuqala: protagonist, intatheli Sergei Dovlatov wabhala inothi mayelana International Engqungqutheleni yesayensi eTallinn. Abahlanganyeli wawuhlanganisa ososayensi kusukela amazwe ezifana eSoviet Union, Poland, Hungary, eMpumalanga Jalimane, Finland, Sweden, Denmark naseJalimane. Ngaphezu kwalokho, umsunguli Okuxakayo ekutshela ukuthi wabekwa icala yezombangazwe esifushane okwesa-, njengoba amazwe hhayi ohlwini oda. It kuvela ukuthi uhlu kwadingeka ukuba hhayi alfabhethi, njengoba kuyisiko, kodwa kwamanye zindlela. Ekuqaleni - lizwe nge ukunqoba zokubusa ngesimiso sokusebenzela uhulumeni, bese - bonke abanye. Yena yakopishwa izikhathi eziningana. Kungakanani awuzange ukhokhe? emibili ruble kuphela. Ngiyethemba - ezintathu ... ebucayini Okwesibili: isihloko sublime "Abaphikisi umoya" ukumaka iminyaka engu-50 Tallinn Hippodrome. bamakamela abaziwayo, master nabagibeli ngobudlova ukuthuthukisa zohlobo futhi sithokozise izilaleli intuthuko yabo yamasonto onke. Ngemva izingcaphuno abukise kusukela nsuku kulandela indaba umlobi ngalokho empeleni kwenzekani emjahweni. Le ndawo umbukwane esidabukisayo - inkambu ezinodaka, umpheme ohlala izibukeli etshekile futhi isixuku, njalo uvakashela ibha, njengoba lapha kuphela ukuthengisa blackstrap asemabhodleleni. Intathelizindaba emva imidwebo emibili noma emithathu, eyenziwe incwajana yamaphuzu icela "usizo" isihloko protagonist - ezithembisa abasha jockey Ivanov. Yena lowo "utshela" igama umholi eyaziwa kakade futhi bobabili azuze.
Ukuhlehla ezintathu: inothi ephephandabeni "Intsha Estonia" mayelana izivakashi abancane abanekhono. Heroine we "indzaba" - Student studio choreographic Alla Myaleshka nabangane kabani athembekile - nomqulu we Bloc kanye ikhamera. Ngubani empeleni, lokhu "intokazi romantic"? Kukhona isigaba abasha "hhayi omubi, elonakele, akukho ... kunalokho abanganaki kangaka" amantombazane ngezenzo ezingenakubalwa nezifiso 'ezingafanele. neze ukuqagela umphefumulo. " Alla babevela Dvinsk ayoba ngowomunye "umngane" obubodwa Miti Klenskogo intatheli. Bahlale fun futhi awanaki wachitha kusihlwa enkampanini eyodwa, futhi ngosuku olulandelayo kwathi Klensky kwesokunxele futhi akazange amshiye iyiphi imali. Dovlatov inikeza indlela yokuphuma yalesi simo - ukusingatha izingxoxo zabafuna umsebenzi wakhe, khona-ke yena uzokhokha ruble amabili, futhi mhlawumbe nangaphezulu.
S. Dovlatov, "Ukuhlehla": Isifinyezo akugcini
Ukuhlehla ezine: kwesihloko esithi "Incwadi Estonia ABC" siqukethe cute, imilolotelo ayinangozi. The hero esemqoka ye nkondlo ibhere, esiza izingane Russian ufunde Estonia. Umfundisi we-Committee Central evala kwesigaba, uyakubona isithombe abangenacala amabhere chauvinist isu ukuthi zonke Estonia - isilwane: "Mina, Party Central Committee ofundisa - isilo"
Bahlehle yesihlanu: esenzeka ngalo yokukhululwa Estonia waba unyaka okwazalwa ngawo Abakhe 400,000 th of Tallinn. In amazwi Goethe, "umuntu engazalwa, ngakho okuzelwe umhlaba wonke!" Nakuba Goethe neze lokho, ngoba ukuthi ndaba, akakho owake yazi ukuthi akhawunti wayewukuphela elafika ebuntwaneni. Akhethwe sesihloko "umuntu awusona injabulo "wakhetha osanda kuzalwa lokuqala eside wayeyindodana abesifazane Estonia futhi Ethiopia -. kuba sobala" umshado "yesibili -. indodana yendoda engumJuda -. umhleli Chief ikakhulukazi yamukela kuphela lesithathu njengoba yena - indodana Estonia futhi isi-Russian, ehlanganisa CPSU uhlala kwenye. into ebaluleke - abazali bajabule kufanele abize Un uLembit. Ukuze lokhu uyise ahlinzekwa isifumbathiso ruble angu-20. Yena uyavuma.
Bahlehle lesithupha: ohlelweni lomsakazo "Umhlangano nendoda ezithakazelisayo," okulungiselelwe izintatheli Agapov L. futhi S. Dovlatov. Emoyeni ozobhapathizwa wesayensi yezomnotho. Ngemva kweminyaka emine, ebusweni intatheli Agapova isibanda yavela. Kuyoba baphonse zasendle uneso unjiniyela self-wafundisa namakilasi ezine imfundo, okuyinto banikela in rush yingxenye kumagazini olandelayo. Nokho, bebone imidwebo yakhe "brilliant" yendlu esizayo, uchwepheshe linikeza lokuwunikela esibhedlela sabagula ngengqondo. Uhlelo ivaliwe. Ethemba "Innovator" hit Lida umbusi metal ekhanda, futhi umsebenzi wakhe iphazamisekile isikhathi eside.
Bahlehle lwesikhombisa: yashicilela isihloko ngaphansi kwesihloko esithi "Indoda ngalo msebenzi." Dovlatov "zingaphila" futhi ezithakazelisayo ukubhala mayelana umklami yokugqoka we Russian Drama Theatre e-Estonia Waldemar Silde, okuyinto ngokungangabazeki, wayeyindoda abahlakaniphe kakhulu. Nokho, ngemva sihloko imbangela yakhe "ekhaphethini" eya kumhleli. It kuvela ukuthi wengqephu odumile iye Kusolakala zingabakhapheli lokhokho, futhi umqondisi ethiyetha wahlala for nobungqingili. "Akazange unamathele kuwe? - yanukubezwa, ngicabanga. Esandleni sakhe intatheli sigcwalisiwe. Lokho ngavele ngabhalisa okuyinto eyangimangaza u ... "
Bahlehle owesishiyagalombili iphephandaba eshicilelwe incwadi yocingo uBrezhnev ngu milkmaids Estonia. Heroine ngokujabula kubika okusezingeni eliphezulu ubisi isivuno, ukwamukelwa kuyo umdlalo .... Dovlatova intatheli bese ucindezela umthwebuli Zhbankova wathumela ngezebhizinisi. Kufanele xoxa milkmaids, futhi ukuthi ngeke babhale incwadi yocingo. Kodwa "amaqabane 'kusukela engumakhelwane ekomidini esifundeni iqembu anakekela konke. Bahlela umhlangano asigcini nje ngokulalela okushiwoyo "iqhawe zomsebenzi", kodwa "ngezandla ezifudumele" kwelinye "Cottages" suburban kuze kube solwandle lwamaFilisti utshwala amantombazane amabili amancane abakulungele ukuze sifeze noma isiphi bethanda izivakashi. Izingxoxo incwadi yocingo zabhalwa phakathi nekhefu Ngamafuphi, "Uhlelo kwamasiko".
S. Dovlatov, "ebucayini": isifinyezo enzuzo
Ukuhlehla Nine: yashicilela isihloko "Ibanga nzima kakhulu 'Tiina Karu - medalist, kusho uNobhala we-Committee Komsomol, ukukhuthazela umsubathi nososayensi abasha kuthembisa. Uma Tina waphendukela iqhawe main usizo. Iqiniso ukuthi bavele izinkinga engavamile nomyeni wakhe. Idinga izifundo "Ukukhululwa" embhedeni. Dovlatov wenqaba ukudlala indima uthisha. Nokho, okhethwe umngane wakhe, ayefune wayejabula kakhulu. Ngemva "ukwehluleka" ambalwa intombazane ekugcineni kuba "i umfundi omuhle kakhulu." Ngo ukubonga, yena ukunika umbhali ibhodlela likagologo.
Ukuhlehla kuyinto okweshumi: "Bona kusivimbele ophilayo" - isihloko encane mayelana wangaphambili intatheli E. L. Bush, abake wayeseJerusalema futhi esiteshini esisangulukisayo-up. Umbhali nostalgic mayelana izikhathi ubudala, mayelana nendlela wafika Tallinn kungekho imali, akukho msebenzi, noma abangane futhi bengazi ukuthi ukwenza nokuthi bangaya kuphi ukuze. Asinikezwayo ifoni Bush ukuthi uyazi lutho, kodwa uyemukela futhi umema ukuhlala naye futhi "ladylove" yakhe ezayo. Bush - indoda edidayo. Ngakolunye uhlangothi - a nabanomusa, ethembekile, abanamakhono, ngeke bahlehle neziphathimandla. Ngakolunye - a ngokunganaki, ukuphuza, ekungabazeni izisusa zabanye, ophila ngezithukuthuku abesifazane asebekhulile. Njengoba umlobi ngokwakhe uthi, ayisekho luhlukanisa abantu ku emihle nemibi.
nanye Ukuhlehla. Obituary: imemori kwaphakade umqondisi studio ithelevishini Hubert Ilves, uyindoda ethembekile futhi esezingeni elifanele, izwe bayohlale besikhumbula abangane bakhe futhi amaqabane. Phakathi "emcimbini" kwembula ukuthi oshonile - akusiwona Hubert Ilves, nabantu "okuvamile." Yini okumelwe uyenze? TV, ukusakaza bukhoma, yokuvalelisa. Makube njengoba sinjalo, futhi ebusuku sizokwazi ukushintsha amabhokisi. Nakuba ukuthi namanje engenzeka uma emathuneni nelungelo empeleni wangcwatshwa kungekho ezinye, hhayi isihlobo, hhayi uzakwabo, futhi careerist akuzenzisi bezymonnogo indoda ngaphandle umphefumulo, wanqotshwa imizwelo, ukukhungatheka amathemba ...
S. Dovlatov, "ebucayini": isifinyezo sezinto izokuphela
Ukuhlehla kuyinto nambili, zinyanga "Memory - isikhali esesabekayo '- izithombe kusuka rally elilandelayo republic neziboshwa zangaphambilini kwamakamu okuhlushwa aseJalimane. I protagonist futhi okufanayo cindezela umthwebuli Zhbankov wathumela ngezebhizinisi. Uhlelo lomcimbi simi ngale ndlela: okokuqala - ukuhlangana nabangani, le ngokomzwelo ingxenye yayo, kuyothi -I olusemthethweni ingxenye, siyakuhalalisela, futhi ekupheleni - edilini eside elindelwe, okuyiwona konke ababekwenza beza. Ngesikhathi gala "isidlo" ngemva izingilazi zotshwala ezimbalwa odakiwe kuvela ukuthi ngemva abaningi emakamu okuhlushwa amaNazi ayihambanga ekhaya, kodwa Mordovia naseKazakhstan, njengamambuka. Ngaqombola umbuzo kazwelonke: engumJuda, ngubani uFinn. Zhbankov kubhula isimo, esikhundleni ukuthatha 'umqhele' ingqalabutho lamaphayona.
"Kulendaba azikho izingelosi futhi akukho amashinga ... Azikho izoni futhi akukho ngakhethi. Futhi empilweni abazi khona ", - uthi umlobi. Othile athambise isandla, umuntu eba inyumbazane .... Nakuba, uma kungewona wonke, iningi, okungenani kanye empilweni yabo baya kule "deal ', subordinated yezimo ezithize, sagged, asenzi zonke unembeza. Kodwa lapha into esemqoka - ukuyeka ngesikhathi, kungenjalo ... protagonist bashiya konke ababekwenza kwesokunxele. "Kuleli gama edabukisayo mina ngithi goodbye kuya journalism. Kwanele! '- uSergei Dovlatov, "Ukuhlehla".
Abalobi Izingane engcono yesimanje futhi imisebenzi yabo: ohlwini, simo kanye nokubuyekeza